कोरोनाको तेश्रो लहरले अबको ३० देखी ३५ दिन सहिनसक्नु गराउने बिज्ञको चेतावनी। |
August 6, 2021 adminLeaveaComment on कोरोनाको तेश्रो लहरले अबको ३० देखी ३५ दिन सहिनसक्नु गराउने बिज्ञको चेतावनी।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहरबाट बच्न तयारी अवस्थामा रहन सचेत गराउँदै पटकपटक विज्ञप्ति निकाल्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टकै परिवर्तित रूप कप्पा भेरिएन्टसमेत पुष्टि भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड थप कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशसमेत गरिरहेको छ । तर के कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चाँडै आउँदै छ ? वा, दोस्रो लहरकै निरन्तरता हो ?
कोभिड–१९ को सक्रिय संक्रमितको संख्या पछिल्लो दिन उल्लेख्य वृद्घि देखिए पनि यो दोस्रो लहरकै निरन्तरता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । तेस्रो लहर आएको भए हालको जस्तो मध्यम गतिमा संक्रमण नबढ्ने उनीहरूको दाबी छ । तर, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाप्रति बढ्दो लापरबाहीले दोस्रो लहर समाप्त नहुँदै तेस्रो लहर आउन सक्ने जोखिमसमेत उनीहरूले औंल्याएका छन् । भारतमा दसैंताका तेस्रो लहरको सम्भावना रहेकाले नेपालमा पनि त्यससँगै तेस्रो लहर देखिने उनीहरूको आकलन छ ।
‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि साउन पहिलो साता संक्रमण बढेको थियो, १०–१२ दिनदेखि करिब उस्तै अवस्था छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘यो दोस्रो लहरकै निरन्तरता हो, निषेधाज्ञा हटेपछि आमसर्वसाधारणको सक्रियता बढेको र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा समेत लापरबाही गरिएकाले संक्रमण बढेको हो ।’ केही दिनयता संक्रमणले दोस्रो लहरकै ढाँचालाई पछ्याइरहेको उनले बताए । ‘तेस्रो लहर आएको भए ढाँचा नै फरक हुन्थ्यो,’ डा. दासले भने, ‘कोभिडको नयाँ तरंग नेपाल आइसकेको भए संक्रमणको गति यति सुस्त हुने थिएन ।’ बिरामीमा देखिएको लक्षणले पनि दोस्रो लहरकै निरन्तरता पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।
हाल अस्पताल भर्ना हुने बिरामीमा दोस्रो लहरमा जस्तै मुख्य रूपमा दुवै फोक्सोमा संक्रमण र अक्सिजनको कमीजस्ता समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा पनि महामारीको दोस्रो लहरकै निरन्तरता मान्न सकिने उनीहरूले बताए । हाल पीसीआर परीक्षण गराउने हरेक चार जनामध्ये एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बिहीबार देशभरि ११ हजार ९७० नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि दर २५.३३ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ७ जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको छ । बुधबार संक्रमण पुष्टि दर २६.२ प्रतिशत थियो । साउन १ मा यो दर २०.८६ प्रतिशत थियो । ‘बीचमा संक्रमणको अवस्था तलमाथि भए पनि यो दोस्रो लहरकै निरन्तरता हो,’ राष्ट्र्रिय क्षयरोग केन्द्रका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. नवीनप्रकाश शाह भन्छन्, ‘मुलुकमा कोभिड संक्रमणको दैनिक दर २०–२२ प्रतिशतभन्दा तल कहिले भएन ।’
६१ बर्षिय बृद्धसँग विबाह गर्छु भन्दै नजिकिएकी यि युवती विबाहको अघिल्लो रात यस्तो गरिन्(भिडियो हेर्नुहोस)